» ‘धेरै भात खाएर मोटोपना बढ्ने हैन रोक्न सकिन्छ’ !
‘धेरै भात खाएर मोटोपना बढ्ने हैन रोक्न सकिन्छ’ !
२६ बैशाख २०७६, बिहीबार ०६:२३
होनोलुलु, – मोटोपनाले तपाईं दुःखी हुनुहुन्छ ? पेट भर्ने गरी भात खान पाउनु भएको छैन ? यदि त्यसो हो भने भात मन पराउनेहरुका लागि एउटा सुखद् समाचार छ। भात धेरै खाए मोटो भइन्छ भन्ने परम्परागत सोच बदल्नु पर्ने अवस्था आएको छ।
एउटा अध्ययनले भात खाएर मोटोपना बढ्ने नभई रोक्न मद्दत गर्ने देखाएको छ।जापानका अनुसन्धानकर्ताहरुले औसत रूपमा भात खाने मानिसलाई मोटोपना घटाउन सजिलो हुने बताएका छन्। उनीहरुका अनुसार एउटा कपको लगभग एक चौथाई भात खाने मानिसलाई मोटोपना घटाउन सजिलो हुनसक्छ।‘तौल बढ्नबाट रोक्नका लागि भात खानु लाभदायक देखिएको छ,’ अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका तोमोको इमाईले बताएका छन्। ‘चामलका दानादानाबाट प्राप्त हुने फाइबर, पौष्टिक तत्व र विरुवाजन्य पदार्थले पेट भरिएको अनुभूति गराउने र थप खान मन लाग्नबाट रोक्ने देखिएको छ,’ उनले बताए।
अनुसन्धानकर्ताहरुले चामलबाट बनेका सबै उत्पादनलाई अनुसन्धानको नजरबाट हेरेको बताइएको छ। उनीहरुले सेतो र खैरो चामल, चामलको पिठो र ती चामलजन्य सबै चिजको उपभोग गरेर अनुसन्धान गरेको बताइएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरुले ती चामलको उपभोग र सोबाट उत्पन्न हुने ऊर्जाबारे एक सय ३६ राष्ट्रका १० लाखभन्दा बढी मानिसमा अनुसन्धान गरेका थिए। अनुसन्धानपछि भातको बढी उपभोग गर्ने राष्ट्रहरु जस्तैः बंगलादेश, लाओस् र कम्बोडियामा मोटोपनाको तह तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अनुसन्धानकर्ताहरुले पत्ता लगाएका थिए। अनुसन्धानकर्ताहरुले भातको कम उपभोग गर्ने फ्रान्स, बेलायत र अमेरिकामा मोटोपनाको बढी समस्या देखिएको बताएका छन्। ‘दैनिक खानाका रूपमा भात खाने राष्ट्रमा मोटोपनाको दर कम रहेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ,’ अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका इमामीले बताए। त्यसैकारणले पनि चामलबाट बनेका जापानी वा एसियाली प्रकारका खानाले मोटोपना रोक्न सक्छ,’ उनको भनाइ छ। इमामीले अनुसन्धानले कारण र असर सम्बन्ध स्थापना नगरेको भए पनि यसबारे थप अनुसन्धान आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
एमालेका प्रतिनिधिको भोगाइमा सौराहा : ‘लोभलाग्दो व्यवस्थापन, गजबकाे आतिथ्य’
२४ घण्टामा नेपालमा काेराेना सङ्क्रमणका कारण कसैकाे पनि ज्यान गएन
माओवादी केन्द्रले विधान परिमार्जनका लागि ५ सदस्यीय उपसमिति बनाउने
हाई अल्टिच्युड रसुवा माउन्टेन बाइक च्यालेन्जको उपाधि लक्ष्मणलाई
अफगानिस्तानका बालिका विद्यालय जान पाउने, महिलालाई विवाहका लागि दबाब दिन नपाइने
मौसम खुलेपछि त्रिभुवन विमानस्थलमा उडान र अवतरण नियमित